SCREEN ကိုအဖွင့်အပိတ် အလိုအလျောက်လုပ်ပေးမယ့် Smart Cover Pro (Screen Off) v1.42 Apk ~ မိုးညိုသား
SCREEN ကိုအဖွင့်အပိတ် အလိုအလျောက်လုပ်ပေးမယ့် Smart Cover Pro (Screen Off) v1.42 Apk
ဒီ APP လေးကတော့ FLIP ကာဘာ သုံးတဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့်
1. ဒီ APP ဟာ GOOGLE PLAY မှာဆိုရင် 7.75 ဒေါ်လာ ပေးရတဲ့ APP ပါ။
2. ဒီ APP ဟာ FLIP ကာဘာ သုံးတဲ့ လူတွေအတွက် SCREEN အဖွင့် အပိတ်ကို
CONTROL လုပ်လို့ရတဲ့ APP တခု့ပါ။
3. ဒီ APP ကို ၁၀ ကြိမ်လောက်စမ်းသပ်ပြီးမှ ကောင်းကောင်းအလုပ် လုပ်လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။
4. ကာဘာကို အဖွင့်အပိတ် လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ SCREEN ဟာ မိမိတို့ SETTING
အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ ရေးပေးထားသလို GOOGLE PLAY မှာ သွားရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်
APP လေးကိုတော့ အောက်မှာ လင့် ၂ ခု့ကနေတင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1. This app isapaid version of the Smart Cover Lite(Screen Off).
3. This app is using the proximity sensor can control the Screen On / Off.
4. After testing about 10 times on each step, select the step that work very well .
5. After updated ,the used step may not be appropriate. Then please select other step.
- Sensor pause when plug headset
VIDEO လေးနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာကြည့်နိူင်ပါတယ် ခင်ဗျာ